Maamulka Puntland oo qarka u saaran inuu dagaal ka qarxo | KEYDMEDIA ENGLISH
Khilaaf aad u weyn ayaa xilligan soo kala dhex galay Madaxweynaha Maamulka Puntland Saciid Cabdilaahi Dani, iyo Taliyihii hay'adda Nabad Sugida Puntland, kaasoo diiday wareegto xilka looga qaadayey oo ka soo baxday xafiiska Dani.
BOOSAASO, Soomaaliya - Maxamuud Cabdulaahi Cismaan Diyaano, oo ahaa taliyihii hay'ada nabad sugida Puntland ee loo soo gaabiyo (PSF) ayaa ka soo horjeestay xil ka qaadis uu sameeyey Madaxweyne Dani, waxana xaaladdaasi ay abuurtay xiisad kulul oo ka soo cusboonaatay degaannada Puntland
Maxamuud Cabdulaahi ayaa la dhashay Asad Cabdulaahi Cismaan Diyaano, oo isagu in ka badan 10 sano hoggaan u ahaa hay'ada nabad sugida Puntland, kana mid ahaa sidoo kale musharaxiintii uu ka guuleystay Dani.
Khilaafkan ayaa dhaliyey in koox walba ay qabsato saldhigyada ciidamada ee ku yaalla deegaannada Puntland, waxana xiisadu ay tahay mid u dhaxeysa jufooyinka hoose ee beesha Cismaan Maxamuud oo ay labada ninba ka soo jeedaan.
Dani ayaa jufadiisa hoose doonaya inuu gacanta u galiyo hay'adaha ugu muhiimsan ee ciidamada, si ay u siyaado awoodiisa kursiga, maadaama uu sanadahii ugu danbeeyey caddaadis kala kulmayey Asad Diyano oo ay wada dhasheen taliyaha iminka diidan wareegtada xilka looga qaaday.
Ciidamada nabad sugida Puntland ayaa ku dhaqaaqay, tallaabooyin ay uga careysiinayaan Dani, iyagoo soo faarujiyey saldhigyadii ay ku lahaayeen meelaha ka baxsan magaalooyinka, sidii kii ku yaalay degaanka Suggure ee buuraleyda goolis, waxana kuwa soo baneeyey fariisimada ay xoojinayaan ciidamo kale oo ku sugan saldhiga ugu weyn ee PSF ku leedahay Magaalada Boosaaso, halkaasoo ay iminka isku hor fadhiyaan iyaga iyo ciidamada daraawiishta Puntland oo uu soo diray Saciid Dani.
Goobaha ay ka baxeen ciidamadan oo ay ka mid tahay buuraha Calmadow, ayaa ah meelaha ay Shabaabku inta badan ka soo qaadaan weerarada, waxana buurahaasi ku dhuumaaleysta maleeshiyaad ka tirsan Shabaab iyo Daacish, kuwaasoo iminka ay fursad u tahay khilaafka ka dhex aloosan ciidamada Puntland.
Puntland ayaa wajaheysa xaalad kale oo adag, waxana hay'adan nabad sugida ee (PSF) tan iyo markii dhidibada loo taagay oo laga joogo 15 sano maamulayey ama gacanta ku hayey qoyska, agaasimaha diiday xil ka qaadista, iyadoo sida la sheego uu hay'adan aas aasay aabihii Cismaan Diyaano, halka walaalkiina Asad Cismaanna, uu in ka badan 10 sano hoggaan u ahaa.